နွေဦးထီရောင်းချမှု အချိန်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းနှင့် ထီ ဘယ်လိုထိုးမလဲ…? - Han Nyein Oo
နွေဦးထီရောင်းချခြင်း အချိန်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်မှုသတင်းနှင့် ထီ ဘယ်လိုထိုးမလဲ
နွေဦးထီရောင်းချခြင်းအား နေ့စဉ်အချိန်တိုးမြင့်ပြောင်းလဲ ပေးထားကြောင်း ကြေညာခြင်း
တော်လှန်ရေးအောင်စိတ်ဖြင့် နွေဦးထီကို ဝယ်ယူအားပေးလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံ့သားကောင်းများအား လေးစားစွာ ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုရင်း.
နွေဦးထီရောင်းချခြင်းအား နေ့စဉ် မနက် ၁၀ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအထိ တိုးမြှင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူများ၏ အာဏာရှင်တော်လှန်စိတ် မည်သည့်အခါမျှ သွေးအေး သွားခြင်းမရှိကြောင်းကို နွေဦးထီနှင့်အတူ အောင်လံလွှင့်ချီ သက်သေပြကြပါစို့။
အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်းများကြားမှ ဝယ်ယူအားပေးကြသော တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းအား အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ မကြာခင် မုချကျဆုံးရမည်။
အဖြေ – အောင်လံလွှင့်ချီနွေဦးထီ page ၏ messenger bot မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
(Bot သည် လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အတွက်သာ လုပ်ထားသော chatbot တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို bot သို့စာပြန်ခြင်း၊ စာပို့ခြင်းများ လုပ်၍ မရပါ။ bot တွင်ပေါ်သော card လေးများကိုသာ တစ်ဆင့်စီနှိပ်၍ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။)
(၂) လက်မှတ်ဝယ်ခြင်း အောင်မြင်/မအောင်မြင် ဘယ်လိုသိနိုင်ပါမလဲ❓
အဖြေ – လက်မှတ်ဝယ်ရန်နှိပ်ပြီးလျှင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များဖြည့်ရပါသည်။ နောက်ဆုံး Ok နှိပ်ပြီးလျှင် Secret Code ကျလာလျှင် ဝယ်ယူမှုပြီးမြောက်ပါမည်။
(၃) Secret Code ကို ဘယ်လိုပြန်ကြည့်လို့ ရနိူင်မလဲ❓
အဖြေ – Secret Code သည် သင်နှင့် သင်၏ အေးဂျင့်အကြားတွင် မှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးရန် တစ်ကြိမ်တစ်ခါသာ ပေးပို့သော code ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထို secret code ကျကျခြင်း screenshot ရိုက်ထားပါ။ (သို့မဟုတ်) ချ၍ ရေးမှတ်ထားပါ။
(၄) Secret Code ကို ဘာအတွက် သုံးရမှာပါလဲ❓
အဖြေ – Secret Code သည် သင်နှင့် သင့်ကို ဆက်သွယ်မည့် အေးဂျင့် မှန်ကန်မှု စစ်ဆေးနိုင်အောင် ကြားခံ code လေးပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်အား အေးဂျင့်မှ ဆက်သွယ်လာလျှင် secret code ကို ပြခိုင်းပါ။ ပြနိုင်မှသာ နွေဦးထီ အေးဂျင့်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည်။
(၅) လက်မှတ်အမှာစာတင်ပြီးလျှင် ဘယ်နှစ်ရက်စောင့်ရပါမလဲ❓
အဖြေ – ပုံမှန် ၇၂ နာရီအတွင်းတွင် သင့်ထံသို့ အေးဂျင့်မှ Signal (သို့) Viber မှတစ်ဆင့် ဝယ်သူရွေးချယ်ထားသော communication channel ပေါ် မူတည်၍ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါမည်။ ဝယ်သူဘက်မှ မိမိဖုန်းနံပါတ်သည် Signal (သို့) Viber ဖွင့်ထားသော နံပါတ်ကိုသာ ထည့်ပေးရန် အရေးကြီးသည်။
တခါတရံတွင် ဝယ်သူ၏ နံပါတ်အား Signal (သို့) Viber တွင်ရှာဖွေရန် အခက်အခဲရှိပါသောကြောင့် အေးဂျင့်မှ သူ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား အောင်လံလွှင့်ချီနွေဦးထီ chatbot မှတစ်ဆင့် ဝယ်သူထံသို့ ပို့လာနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဝယ်သူအနေဖြင့် အမှာစာတင်ပြီးသည့် ရက်မှစ၍ သင်၏ Signal (သို့) Viber (သို့) နွေဦးထီ chatbot သို့ မကြာခဏ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်း / ကြည့်ရှုခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
(၆) ဝယ်ယူပြီးပါက လက်မှတ်အား ဘယ်လိုပြန်ပေးပို့မှာပါလဲ❓
အဖြေ – နွေဦးထီလက်မှတ်ဝယ်ယူမှုပြီးမြောက်လျှင် အေးဂျင့်မှ သင်၏လက်မှတ်အား နွေဦးထီ chatbot တွင်းသို့ ပြန်လည်၍ ပေးပို့ပေးပါမည်။ (Signal သို့ Viber မှမပို့ပါ)
*ငွေပေးချေမှုအောင်မြင်ပါသည်* ဆိုသော notification ရောက်လာလျှင် ထို card လေးအား နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါက အထဲတွင် လက်မှတ်အတွက် link ပါလာမည်။ ထို link ကိုနှိပ်၍ မိမိ လက်မှတ်အားစစ်ဆေး ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(၇) နွေဦးထီအမှာစာတင်ထားသော message ကိုဖြတ်မိလျှင် လက်မှတ်ပျောက်သွားမလား❓
အဖြေ – မပျောက်ပါ။ နွေဦးထီ – messenger bot သို့ပြန်ဝင်ပါ။ *Get Started* နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် *မိမိထီလက်မှတ်* ဟူသောနေရာသို့ဝင်ပါ။ ထိုအထဲတွင် သင်၏လက်မှတ်ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သော link လေး ရှိနေပါမည်။
(၈) အကယ်၍ လက်မှတ်အစောင်အရေအတွက် မမှန်လျှင် (သို့) ကြည့်မရလျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ❓
အဖြေ – မိမိအားဆက်သွယ်ထားသော အေးဂျင့်သို့အကြောင်းကြားပါ။ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးပါမည်။
(၉) လက်မှတ်အော်ဒါ ဘာလို့ ထပ်ဝယ်မရတာလဲ❓
အဖြေ – သင်သည် ပထမတစ်ကြိမ် အော်ဒါတင်ထားပြီး၊ ထိုအော်ဒါအတွက် ငွေပေးချေမှု မပြီးမြောက်သေးလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ဝယ်ယူမရနိုင်ပါ။
တခါတရံ အေးဂျင့်များဘက်မှ ဝယ်သူသို့ လုံးဝဆက်သွယ်မရသော အနေအထားလည်း ရှိနိုင်ပါသဖြင့်၊ အဆက်အသွယ်မရခင် ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းနေသော ကာလတွင် ရှိနေသောကြောင့်လည်း ထပ်မံ၍ ဝယ်ယူမရခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
Cancel လုပ်လိုက်သည် (သို့) ငွေပေးချေမှု ပြီးမြောက်သည်ဟူသော notification မရောက်လာမခြင်း စိတ်ရှည်သီးခံစွာ စောင့်ဆိုင်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပြီးမှသာ ထီလက်မှတ်အား နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဝယ်ယူစေလိုပါသည်။
(၁၀) အေးဂျင့်ဘက်မှ နွေဦးထီ – chatbot မှ တစ်ဆင့် ဖုန်းနံပါတ်ပေးပို့လာလျှင် ဘာဆက်လုပ်ရပါမလဲ❓
အဖြေ – ပေးပို့လာသော ဖုန်းနံပါတ်အား viber (သို့) signal မှတစ်ဆင့် ရှာဖွေ၍ အေးဂျင့်အား သင့်ဆီသို့ ဆက်သွယ်ရန် notification ရောက်လာကြောင်းပြော၍ လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်လုပ်ဆောင်ပါ။
(၁၁) Winner ဘယ်တော့ ရွေးမှာပါလဲ❓
အဖြေ – Winner ရွေးမည့် အချိန်အား နွေဦးထီ official page မှတစ်ဆင့် ကြေငြာပေးမည်။
(၁၂) ထီပေါက်စဉ် မည်ကဲ့သို့ ကြည့်ရပါမလဲ❓
အဖြေ – နွေဦးထီ chatbot သို့ပြန်ဝင်ပါ။ ထိုထဲတွင် *ထီပေါက်စဉ်* ဟူသော card လေးအား နှိပ်၍ မိမိထီလက်မှတ်နှင့် ဝင်ရောက် တိုက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထီပေါက်သော လက်မှတ်ပိုင်ရှင်များကို နွေဦးထီအေးဂျင့်များမှလည်းဆက်သွယ် အသိပေးပါမည်။
(၁) ဝယ်သူသည် မိမိထီလက်မှတ် ဝယ်ယူထားခြင်းအား မည်သည့် social media တွင်မှ မတင်ပါနှင့်။
(၂) မိမိ ထီလက်မှတ် screenshot များအား တင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
(၃) မိမိနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော အေးဂျင့်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား Facebook တွင် တင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
(၄) Viber (သို့) Signal ဖွင့်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ထည့်သွင်းပါ။
(၅) အေးဂျင့်မှ Viber (သို့) Signal တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသောကြောင့် မိမိ Viber (သို့) Signal အား မကြာခဏ စစ်ဆေးရန်။
(၆) အေးဂျင့်သည် နွေဦးထီ chatbot မှတစ်ဆင့် သူ၏ဖုန်းနံပါတ်အားလည်း ပေးပို့လာနိုင်ပါသည်
(အကယ်၍ ဝယ်သူအား Viber (သို့) Signal တွင် ရှာမတွေ့ပါခဲ့လျှင်)။ ထိုကြောင့် ဝယ်သူအနေဖြင့် မိမိအော်ဒါတင်ထားသော နွေဦးထီ chatbot တွင်လည်း မကြာခဏ ဝင်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ပေးပါ။